मन परेकी स्वास्नी (कथा) – Chitwan Post
मन परेकी स्वास्नी (कथा)
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेष्ठ १८, २०७६
नेपाल दरबारमा रहने कसैको पनि विवेक नहोस् भनी काजी भीम मल्लकी पत्नीले सती जाने बेलामा श्राप दिएकी थिइन् । त्यसैले, कुनै विपत्ति आइलागेमा आजसम्म पनि सतीको श्राप परेको भन्ने गरिन्छ । जिउँदो शरीरलाई लोग्नेको चितामा खरानी पार्नुपर्ने विवश सतीले श्राप गरेझैँ दरबार पसेर गद्दी चढेपछि विवेक हराउँदै गएको र भोगविलासले सगरमाथा छुन खोजेको कुनै नौलो प्रक्रिया होइन । त्यसैले, गद्दीमा चढ्नेबित्तिकै राजा रणबहादुर शाह पनि निकै विलासी भएका थिए । सुन्दरीहरुलाई जन्तीजस्तो लस्कर राख्ने र रखौटी बनाएर एकलौटी उपभोग गर्ने नशा चढेको थियो उनलाई पनि । तरूनीहरु कोठाभरि छरेर सिरानी बनाउने त दरबारियाहरुको वंशाणुगत रोग नै हो । पुर्खाबाट वंशाणुगत रोग त कहाँ हट्न सक्थ्यो र ? यस्तो रोगको शिकार नहुने सन्तान कमैमात्र भेट्न सकिन्थ्यो दरबारमा । धन्य, यस्ता सयौँ रखौटी र सुन्दरीहरुसँग तालमा पौडिँदा पनि एचआईभी एड्सलाई भने जित्न सक्ने दरबारियाहरुको अर्को अनौठो विशेषता नै मान्नुपर्छ त्यतिबेला, कि त एचआईभी एड्सको पत्तो नभएको हुनुपर्छ ।
बच्चाको आँखाले बजारका हरेक खानेकुरामा आफनो भोक टाँसिएको देख्छ । त्यस्तै, हरेक चेलीहरु देख्नेबित्तिकै रणबहादुर शाहको आँखाले भोगमात्र देख्न थाल्छ । त्यतिबेला पशुपतिनाथको दर्शन गर्न मिश्र ब्राह्मण परिवार पशुपतिको धर्मशालामा आइबसेको र तिनका साथ एक अति रुपमती बालविधवा कान्तिवती पनि रहेको कुरा रणबहादुरको कानमा पर्नासाथ उसका हरेक अङ्गप्रत्यङ्ग उत्तेजनाको चरम बिन्दुमा दौडिँदै पानीभित्र चलपलाएका माछाझैँ चलपल गर्न थाले । कान्तिवतीलाई आफ्नो वशमा पार्न राजा आफैँ हात्ती चढेर पशुपतिनाथको धर्मशालातिर हुइँकिए ।
चलचित्रका दृश्यहरुमा घोडा र आफ्ना पहलमान लिएर युद्ध गर्न गएको खलनायकले जबर्जस्ती नायिकालाई उठाएर ल्याएझैँ कान्तिवतीलाई पनि दरबारमा ल्याइपु¥याइयो । राजाजस्ताले जबर्जस्ती गर्दा न त उसले प्रतिकार गर्न सक्थी, न त न्यायका लागि कोहीसँग भीख माग्न नै सक्थी । राज्यप्रमुख जसलाई जनताले भगवान्को अवतारको रुपमा र न्यायदेवताको रुपमा लिन्छन्, उनै यतिबेला एक अबला कान्तिवतीका लागि खलनायक भएका थिए । नारी सुन्दरताको प्रतिबिम्ब हो, सहनशीलताको खानी हो । नारीको सहनशीलता र सुन्दरताको बयान जति गरे पनि कहिलेकाहीँ परिस्थितिले नारीको त्यही सुन्दरता र सहनशीलतासँग खेलबाड गरेको हुन्छ र आफ्नो सुन्दरता आफैँलाई विष बनेर पोल्न थाल्छ । यतिखेर कान्तिवतीको सुन्दरता उसका लागि नै विष बनेको थियो । त्यसैले त, राजाको अपहरण र जबर्जस्ती सहनु परेको थियो बिचरी उसले । केवल उसका सामु दुई विकल्प ठिंग उभिएका थिए, कि त जीवनभर राजाको यौनदासी भएर बस्नुु कि त आत्महत्या गर्नु । यदि प्रतिकारको मैदानमा उत्रिई भने गद्दीको मात चढेका उन्मत्त साँढेजस्तो रणबहादुरले कान्तिवतीको श्वास त के लास पनि बाँकी राख्ने छैनन् भन्ने कुरा निश्चित थियो र राजासँग पौँठेजोरी खेल्नु भनेको बामे सर्न नसक्नेले दौडिनुजस्तो थियो त्यस परिस्थितिमा ।
दरबारभित्रको सानदार माहोलभित्र आफूलाई कैदी महसुस गर्न थालेकी कान्तिवतीले आखिर मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भनेझैँ राजाको अघिल्तिर आत्मसमर्पण गर्दै एउटा सर्त राख्ने चाहना गरिन् । उनको मन रखौटीको डरले पोल्दै थियो, भित्रैदेखि र अस्वीकार गर्दै थियो भित्रैबाट रखौटी बन्नलाई । सिनोलाई देख्दा हाम फालेर झम्टिने गिद्धहरुझैँ रणबहादुर पनि आफ्नो शरीर पाउन जस्तोसुकै सर्त मान्न पनि पछि हट्दैनन् भन्ने बुझेर कान्तिवतीले राजासँग सर्त राखिन्– “मलाई सरकार राखिबक्सिन्छ भने मलाई हजुरको रखौटी होइन रानी बनाएर राखिबक्सियोस्, मेरो पुत्रको जन्म भयो भने राजा बनाइबक्स्योस् । यदि हजुरले मसँग यो सर्त पूरा गर्ने वाचा अहिले नै गरिबक्सिएन भने म दरबारमा रहन र हजुरको रखेल भएन रहन अस्वीकार गर्छु ।” शरीरको प्यासमा छटपटाएको तिर्खालु रणबहादुरको मुखले कान्तिवतीको सर्त सहस्र स्वीकार ग¥यो ।
धर्म र परम्परालाई लात मार्दै अन्ततः कान्तिवतीलाई महारानी बनाएर दरबारमा प्रवेश गराएरै छाडे रणबहादुरले । राजाको यस्तो क्रियाकलाप दरबारमा एकरत्ति मन परेको छैन कसैलाई पनि, तैपनि चुप लाउनुबाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन । स्वयं उसका काका बहादुर शाह पनि रणबहादुरको यस्तो कामलाई घृणित नजरले हेर्थे, तर पनि खुलेर विद्रोह गर्न सक्ने अवस्थामा उनी थिएनन् । हुन त, सीताको अपहरण र रावणको राक्षसी क्रियाकलापलाई पनि चुपचाप सहन विवश थिए त्यतिबेला मानिसहरु । रावणको अत्याचारको विरोध गर्ने उनको भाइ विभीषण र रणबहादुरको अनैतिक कार्यको विरोध गर्ने काका बहादुर शाह दुवै रावण र रणबहादुरका लागि कसिङ्गर बनेका थिए । उनीहरु चाहेर पनि मर्यादा सिकाउन सक्दैनथे गद्दीमा नाच्ने साँढेहरुलाई ।
रणबहादुरले जे गरे पनि छाड्ने छैनन् भन्ने बुझेर होला कान्तिवतीले रखौटी बन्नुभन्दा रानी बन्नु नै ठीक भन्ने सोचेकी थिई । त्यसो त, रानी हुँदा पाउने इज्जत रखौटी हुँदा कहाँ मिल्थ्यो र ? रखौटी नभए भोलि आफ्ना सन्तानहरु कुकुरका छाउराजस्ता बेवारिसे नभई वैधानिक सन्तान हुनेछन् भन्ने आशले पनि कान्तिवतीले रणबहादुरसँग यस्तो सर्त राखेकी थिई । रानी बन्ने लालसामा भन्दा पनि सुरक्षा र इज्जतका लागि रणबहादुरको पत्नी बन्न बाध्य भएकी थिई कान्तिवती । यसबाट आफू आफ्ना सौताहरु राजराजेश्वरी, सुवर्णप्रभा, चन्द्रावती र ललितत्रिपुरासुन्दरीजस्तै दर्जामा पुग्ने कुरामा ढुक्क थिई ।
माया र युद्ध भन्ने कुरा नै अनौठो हुँदोरहेछ सबै कुरा जायज हुने । मायामा मै हँु भन्ने वीर पुरूष पनि आइमाईको पाउ परी आकाशका तारा टिप्नेजस्ता ठूलो वाचासमेत गर्छन् रे । त्यस्तै रुपका भोगी रणबहादुर कान्तिवतीको शरीरको लागि अनेकौँ सर्त पनि पूरा गर्न पछि हटेनन् । नचाहेर पनि दरबार भित्रिनुपर्दाको पीडाले कताकता मनमा घोच्न थाल्थ्यो उनलाई, तैपनि पुत्र गीर्वाणयुद्धविक्रमको जन्मले मातृत्वको वर्षा गराएको थियो उनलाई । अपहरण शैलीमा दरबार पस्दाको चिनो, रणबहादुरको भोगविलासको चिनो वा मायाको चिनो जे भने पनि गीर्वाणयुद्धको जन्मले उनलाई मातृत्व सुखको अनुभवका साथसाथै बालविधवा भएर समाजबाट इच्छा र आकांक्षा कुण्ठित पारेर बस्नुपर्ने संस्कारबाट पनि मुक्ति दिलाएको थियो । आमा बन्नु संसारको सबैभन्दा ठूलो सुखद अनुभुति हो एउटा नारीको लागि चाहे अनेकौँ कष्ट किन नहोस् । परिबन्धमै परेर भए पनि दरबारले त्यो सुखद अनुभूति गर्ने अवसर दिएकोमा खुसी नै देखिन्थी कान्तिवती ।
विडम्बना ! गीर्वाणयुद्ध जन्मिएको केही समय नबित्दै कान्तिवतीलाई क्षयरोगले सतायो र रोगले कान्तिवती गल्दै गइन् । उपचारका लागि भएभरका ज्योतिषी, धामी, झाँक्री, बैद्य, डाक्टर देखाउँदा पनि कान्तिवतीको रोग निको हुन सकेन, किनकि त्यतिबेलाको लागि क्षयरोगको उपचार असम्भव थियो । आफ्नी प्रिय स्वास्नी रोगले जीर्ण हुँदै गएको देखेर रणबहादुर निराश देखिन्थे भने कान्तिवतीको शरीरको साथसाथै आत्मबल पनि निकै कमजोर भइसकेको थियो । बाँच्ने आशाहरु हराए, त्यसैले कान्तिवतीले आफ्नो सर्त सम्झाइन् रणबहादुरलाई । मर्ने बेला छोरो गद्दीमा बसेको हेरेर मर्ने रहर थियो उनको, त्यसैले कान्तिवतीले आफ्नो इच्छा रणबहादुरसमक्ष व्यक्त गरिन् । मन परेकीे स्वास्नीसँगको वाचामा धोका दिन नचाहेर रणबहादुरले आफू र अन्य रानीबाट जेठा छोरा हुँदाहुँदै सिँगान पुछ्नसमेत नजान्ने डेढ वर्षका बालक गीर्वाणयुद्धलाई गद्दीमा बसालेर राजदरबारको नियम तोड्ने कामको सुरूवात र दरबारमा गुटबन्दीको बीजारोपण गरे ।
यो वाचा भन्ने चीज पनि साह्रै शक्तिशाली हुँदोरहेछ चट्टानभन्दा पनि । राजा दशरथले कैकेयीसँगको वाचा पूरा गर्दा रामलाई चौध वर्ष वनवास पठाएर भरतलाई राज्य सम्हाल्नुप¥यो । त्यही वाचा पूरा गर्दा दशरथले अकालमै शोकले जीवन गुमाए, तैपनि वाचा तोडेनन्् । आफ्नो जीवनभन्दा ठूलो हुँदोरहेछ वाचा भन्ने चीज । सायद्, त्यसैले रणबहादुरले पनि मन परेकी स्वास्नीको वाचा पूरा गर्न बरू आफ्नै श्रीपेच छाडिदिए ।
कस्तो अनौठो हुँदोरहेछ प्रेमको डोरी । मन परेको मान्छे पाउन जस्तोसुकै पनि गर्न सक्ने, नियमलाई उल्टाउन, पल्टाउन र सुल्टाउन सक्ने । सायद् यो नै मायाको अपार शक्ति होला । स्वास्नीको इच्छा पूरा गर्न नाबालक छोरालाई गद्दीमा राखेर आफ्नो श्रीपेच फुकाल्न पनि पछि नपर्ने, साँच्चै बचनको पक्का रहेछन् रणबहादुर भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो । धेरैले स्वास्नीलाई झारबराबर पनि नसम्झने र तुच्छ सम्झेर स्वास्नीको इच्छा र चाहनालाई लात मार्दै बुर्कुसी ठोक्ने समाजमा स्वास्नीको इच्छा पूरा गर्न आफ्नो कुर्सी पनि त्याग्न सक्ने रणबहादुरको चरित्र बुझेर बुझ्न नसकिने थियो । पलपलमा तरूनीहरु परिवर्तन गरी उफ्रन सक्ने राजालाई युवतीको के दुःख थियो र ? दरबारमा होस् चाहे दरबारबाहिर, जताततै युवतीको खानी बनाएका रणबहादुरलाई कान्तिवतीको मृत्युले निकै आघात पु¥याएको थियो । उनको इच्छाको निम्ति दरबारको नियम तोडे, किनकि कान्तिवती उनको सबैभन्दा मन परेकी स्वास्नी थिई र पुरूषहरु हरेक पलमा साथ दिने दिलकी धनी स्वास्नीभन्दा रुपकी धनी स्वास्नी नै प्राथमिकतामा राख्दारहेछन्, किनकि रुपसँग जीवन साटेर जीवनभर स्वास्नीलाई यौनदासी बनाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता बोक्दा रहेछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण थिए रणबहादुर आपैmँ पनि ।
कान्तिवतीको प्रेममा चुर्लुम्म डुबेका रणबहादुर आफैँ कान्तिवतीको मृत्युपश्चात् बहुलाजस्ता बन्न पुगे । रोगले राजा र जनता भन्दैन, त्यतिबेलाको परिवेशमा उपचार प्रविधिकै कमीको कारण कान्तिवतीको मृत्यु भएको हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि रणबहादुर बदलाको भाव राखेर कान्तिवतीको उपचारमा संलग्नं बैद्य, धामी, झाँक्री, ज्योतिषी, डाक्टर सबैलाई पिट्न थाले । कतिले त अनाहकमै मृत्यु वरण गर्नुप¥यो । गाली, बेइज्जत गर्ने बिर्ताको रुपमा दिएको जग्गासमेत हरण गर्ने काम गर्न थाले । त्यतिमात्र हो र ? मन परेकी स्वास्नीको मृत्युको कारण मगज खुस्केका रणबहादुरले देवालय र मूर्तिसमेत बाँकी राखेनन् । मन्दिरहरु तोडफोड भए, मूर्तिहरु ढले । राजाको अघिल्तिर मान्छेहरु त मौन रहन विवश थिए, बिचरा मूर्तिहरु त झन् के नै गर्न सक्थे र ? रणबहादुरको भकुन्डो भएर भुइँमा ढलिरहे मूर्तिहरु ।
आफनी प्रिय स्वास्नी मरेकै झोँकमा कति निर्दोष अङ्गभङ्ग भए त कति मारिए, मठमन्दिर भत्काइए तर पनि रणबहादुर अपराधी भएनन् । किनकि, ठूला मान्छेको अपराध त उनीहरुको कुर्सीले ढपक्क ढाकेको हुन्छ । अन्य स्वास्नीहरु अझै जिउँदै थिए । रखौटीहरुको संख्यामा पनि कुनै कमी थिएन । शरीरको भोग मेटाउन कुनै विकल्प नभएको त होइन, तैपनि कान्तिवतीको प्रेम र मृत्यु दुवैमा रणबहादुर किन पागल भए भन्ने कुरा गम्भीर चासोको विषय थियो । रणबहादुरको बौलाहापन चुपचाप सहन बाध्य भएका जनताहरु राजाले कुनबेला कसको पिठ्युँमा कोर्रा लगाउने हो र ज्यान लिने हो भन्ने त्रासमा बाँचिरहेका थिए ।
यदि एउटा सर्वसाधारणको त्यस्तो हालत भएको भए फलानो बौलायो भनेर कुरा काट्नेहरुको लाइन हुन्थ्यो होला । गिज्याउँदै रमाइलो गर्नेको भीड लाग्थ्यो होला, कि त समातेर पागलखानामा कोच्थे होलान् । तर, यतिबेला खुलेआम राजा बौलायो, रणे बौलायो भन्न सक्ने अवस्था थिएन । बौलाहा रणबहादुरको शिकार बनेका देवालयहरु पछि कसैले पुनर्निर्माण गर्दै भगवान्को पुनर्वास गर्दै उद्धार गरेका थिए । अनौठो पागलप्रेमको इतिहास बोकेको तिनै देवालयको एकछेउमा आजको युगको रणे र कान्ताको प्रेमलाप चलिरहेको थियो । फरक यतिमात्र हो कि जबर्जस्ती अपहरण र रखौटीको इतिहास उनीहरुको प्रेमसँग जोडिएको छैन । उनीहरुको प्रेममा मात्र निश्चलता, विश्वास र समझदारी छ । इतिहासले लात्ता मारेको तिनै देवालयलाई पवित्र मानेर साक्षी राखेका छन् आफ्ना पे्रमलाई उनीहरुले । अमर प्रेम र अजम्बरी बनाउने वाचा गरेका छन् उनीहरुले देवालयसँग । उनीहरुको त्यो वाचा पूरा हुने हो वा कान्तिवतीको र रणबहादुरकोझैँ बीचमै टुङ्गिने हो, त्यसको ज्ञाता त समय नै हो र समयले नै बताऊला ।
एक्काइसाँै शताब्दीको आजको युगले व्याप्त समाजमा पनि जीउमा कुनै आधुनिकता झल्काउने फेसन र बेसनको एक छिटा पनि नदेखिने कान्ता प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण छे र शृङ्गारले भरिपूर्ण दरबारको महारानीभन्दा कम छैन । तिनै देवालयमा मायालु अँगालोमा बेरिएर प्रेमको संसारमा डुबिरहेका बेला अचानक “म तिमीबाट हराएँ भने के गर्छौं तिमी रणे ?” भनेर कान्ताले सोधी । “धत् लाटी, यस्तो कुरा पनि गर्ने हो ? म त पागल हुन्छु, नि हाम्रो माया त युगौँयुगसम्म बाँचिरहन्छ नि, यसको साक्षी यिनै देवालय छन्”, रणे देवालयलाई हेर्दै कान्तालाई भन्छ । कृत्रिमताको लेपन दुवैमा छैन, तैपनि प्राकृतिक सुन्दरतामै राम्रा विश्वसुन्दरी र विश्वकै सुन्दरजस्तो देखिने यी दुवैको माया निश्चल थियो झरनाको पानीझैँ ।
मायाको कुनै सिमाना हुँदैन, संसारका कुनै विज्ञले पनि मायाको कुनै सिमाना निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । चोखो मायाले धनदौलत हेर्दैन, रुप देख्दैन, केवल आपसी विश्वास र श्रद्धा हुन्छ जताततै । धनदौलतको अभावमा पनि चोखो मायाले दीर्घजीवन पाउँछ भन्ने सावित गर्न ती देवालयलाई साक्षी राखेर कान्ता र रणेले वैवाहिक जीवनको श्रीगणेश गरे । झुपडी नै भए पनि मायाको थुप्रो पारेर खुसीले जिएका उनीहरुले दुःख गरेर भए पनि छाक टारेकै थिए । त्यसैमा खुसी थिए उनीहरु । उनीहरुलाई देख्दा यस्तो लाग्थ्यो, संसारकै सबैभन्दा खुसी र सुखी जोडी त्यो नै हो । छोरा गीर्वाणको जन्मले अझ खुसीको बहार ल्याएको थियो त्यो मायालु झुपडीमा ।
दुई जनामाथि खाने मुख अर्को थपिँदा खुसी साथसाथै जिम्मेवारी पनि बढेको थियो । बच्चाको च्याँच्याँ रूवाइले त्यो मायालु घर नै पवित्र भएको महसुस गर्दथे उनीहरु । रातदिन दुःख गरेर भए पनि कान्ताको राम्रो हेरविचार गरेकै थियो रणेले । आफ्नै हातले पोसिलो खानेकुरा बनाएर स्वास्नीलाई ख्वाउन पाउँदा र तेल लगाएर छोरालाई मालिस गर्न पाउँदा रणे आफैँलाई संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी र सानो घरलाई स्वर्ग सम्झन्थ्यो । गर्भावस्थादेखि नै सुत्केरी अवस्था र नवजात शिशुको हेरचाहमा समेत कान्तालाई साथ दिएर जिम्मेवार पतिको भूमिका निर्वाह गरेको थियो रणेले । स्वास्नीको प्रजनन स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरी बाहिरी संसारमा राज गर्ने पुरूषभन्दा भिन्न उसले पारिवारिक दायित्व, लोग्ने हुनुको कर्तव्य र पिता हुनुको कर्तव्य सबै बुझेको छ । त्यसैले त उनीहरुको प्रेम आदर्शप्रेमका रुपमा मौलाइरहेको थियो ।
वैशाख महिनाको त्यो शनिबारको दिन थियो । उसले आफ्नै हातले पोसिलो आहार तयार ग¥यो र श्रीमतीलाई खुवायो । अहिलेको अवस्था तिम्रो लागि आराम गर्ने र बच्चाको हेरचाह गर्ने अवस्था हो भन्दै ऊ पटकपटक कान्तालाई सम्झाउँथ्यो । आफ्नै हातले छोराको जीउमा तेल घस्न थाल्यो । छोरा च्याँच्याँ आवाज निकालेर रून थाल्यो । मायालु आँखाले छोरा र स्वास्नीलाई हेर्दै छोरालाई मीठो चुम्बन ग¥यो, स्वास्नीसँग पनि मुस्कुरायो र बेलुकाको गाँस टार्न पाखो बारीतिर लाग्यो ।
चट्टानजस्तो पाखो फोरेर पसिनाले शरीर लपक्कै हुँदा पनि रणे खुसी नै देखिन्थ्यो । किनकि, ऊ आफ्नो सानो घरको खुसी र सुख जोगाउन आफैँ मेहनत गर्दैथ्यो । त्यो मेहनतको पसिनामा गौरवान्वित भएको रणेले जिम्मेवारी पनि राम्रोसँग बुझेको थियो । अचानक धर्ती जोडसँग काँप्न थाल्यो । उसको पाइतालाले आफैँलाई थेग्न नसकेर भुइँमा ढल्यो । गाउँघर सबै जोडसँग हल्लिन थाले । जताततै घर ढलेका धूलोले संसार अँध्यारो भयो । रणेले आफ्नो मायालु घर ढलेको आफ्नै आँखाले देख्यो । हतारिँदै घर जान लाग्दा पाइला त्यतै लर्बराएर ऊ फेरि ढल्यो । बल्लतल्ल साहस गर्दै घरतिर दौडिँदै थियो रणे, फेरि धर्ती जोडसँग हल्लिएर ऊ पुनः भुइँमा लम्पसार प¥यो । जताततै रूवाबासी र भागमभाग देखेको रणेको मनमा डरत्रासले डेरा जमाएको थियो । ऊ त्यहीँ लाचार भएर बच्चाजस्तै क्वाँक्वाँ गर्दै रून थाल्यो । धर्तीको कम्पन सामना गर्दै जसोतसो घर पुगेको रणेले आफ्नै आँखाअगाडि आफ्नो मायालु घर भग्नावशेष भएको देखेर ऊ चिच्यायो बेस्सरी । श्रीमती र बालक छोरो जिउँदा छन् भन्ने आशमा यताउति गर्दै घरको माटोको थुप्रोमा हात हाल्थ्यो, तर उसको के सामथ्र्य पुग्थ्यो र ? शोकले ऊ आफैँ ढल्यो ।
तीन दिनपछि मात्र सैनिकहरुले भग्नावशेषबाट स्वास्नी र छोरालाई निकाल्न सफल भए । मायाको सानो परिवारमा दैव लाग्यो, छोरा र स्वास्नीका किचिएर बिरुप भएको अनुहारलाई उसले नियाल्थ्यो, जुन अनुहारलाई चुम्बन गर्दै ऊ पाखो बारीतिर लागेको थियो । त्यो नै उसको जीवनको अन्तिम चुम्बन हुन पुग्यो । सानो घर, सानो परिवार, मायाले चुर्लुम्म डुबेको परिवारमा दैवले यतिछिटो चुँड्ला भन्ने सपनामा समेत नसोचेको त्यो क्षणलाई सम्झेर रणेको आँखा ओभानो हुन सकेको थिएन । आफूलाई सम्हाल्न निकै कठिन भएको रणेले जसोतसो स्वास्नी र छोराको अन्त्येष्टि त ग¥यो आफ्नै हातले, तर मानसिक चिन्ताले ऊ विक्षिप्त हुन्थ्यो । अनि, पागलजस्तो बेसुर बन्थ्यो । घर ढल्यो, भूकम्पले जीवनसंगिनी र छोरो पनि ढाल्यो, सँगसँगै उसका सारा सपना ढले अनि खुसी पनि ढले ।
सहाराविहीन एक्लो जीवन लिएर ऊ भोक र शोकले भौँतारिँदै, बर्बराउँदै बेसुरा भएर हिँड्न थाल्यो रणे । यिनै पागल प्रेमी महाराज रणबहादुर शाहले लात्ताले हिर्काएको देवालय र फुटाएको मूर्ति त्यसलाई समेत भूकम्पले बाँकी राखेन । जुन मन्दिरमा उसले कान्तासँग जुनी काट्ने वाचा गरेको थियो उनीहरुको पवित्र प्रेमको साक्षी भग्न देवालयमा रणे आजभोलि दिन बिताउँछ, रात काट्छ । न त उसलाई भूकम्पपीडितको राहतले र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको टोलीले नै देख्न सकेका छन्, राहतको लोभमा हात पसार्न पनि जानेको छैन उसले ।
उसको लागि जीवनसंगिनी, संसार जे भने पनि उनै एउटी कान्ता थिई, न त उसका अरु रखेलहरु नै थिए । “यो मन्दिर जोखिमपूर्ण छ, बस्नुहुन्न” भनेर गाली गर्दथे देख्नेले, तर रणेले आजसम्म पनि त्यो देवालय छाडेको छैन । पिसाब लाग्दा पनि त्यही मन्दिरमा पिसाब गरिदिन्छ, भोक लाग्दा पनि त्यही मन्दिरका मूर्तिजस्तै लडिरहन्छ । ऊ घाम, पानी, रात, बिहान त्यही देवालयमै हुन्छ । कसैले दया गरेर खानेकुरा दिए खान्छ, नत्र बेसुर भएर बर्बराउँदै कान्ताको नाम लिइरहन्छ । कतिले उसलाई समातेर त्यहाँबाट पर लैजाने प्रयास गर्दा पनि ऊ भागेर त्यहीँ आउँछ । किनकि, त्यहाँ उसको मन परेकीे स्वास्नी कान्तासँगको जुनी सँगै काट्ने वाचा छ ।
जीवनको एकमुठी सास रहेसम्म उसले वाचा पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले, स्वास्नी र छोराको वियोगमा बौलाएको रणेको सहारा बनेको छ देवालय । भूकम्पपीडित रणेको जीवनको सहारा पनि भूकम्पपीडित देवालय नै । भूकम्पले टुटेको छन् मूर्तिहरु, फुटेका छन् घन्टाहरु, कुच्चिएका छन् भित्ताहरु, ढलेका छन् गजुर तर पनि रणे त्यो ठाउँलाई सम्मान गर्छ । त्यहाँको भुइँलाई स्पर्श गर्दै कान्ता भनेर बोलाउँछ । बिचरा, के थाहा उसको मनको पीडा ! भूकम्पपीडितको राहतको ठेक्कापट्टा गर्नेहरु त केवल सोच्छन् यो बौलाहा हो ।
बौलाएकै सुरमा मन्दिरका इँटाहरु जम्मा गरेर केटाकेटीझैँ घर बनाउन थाल्छ ऊ । आफ्नो परिवार बनाउन थाल्छ र हेर्दै हाँस्न थाल्छ आफ्नो घरलाई । सायद् त्यो उसको सम्झनाबाट हराउन नसकेको मायाको सानो घर हो, जहाँ ऊ, कान्ता र गीर्वाणको माया मिलेको थियो । उसको बालापनजस्तो लाग्ने त्यो घरलाई देख्दा यो रणे बौलायो भन्दथे चिन्नेहरुले । वास्तवमा ऊ एउटा विपद्को इतिहास बोकेको आफ्नो मन परेकी स्वास्नीको चित्र कोरिरहेको थियो त्यो मन्दिरको माटो र ढुङ्गासँग ।
बिकाउ शासन (कविता)